शीर्ष १० स्लाइस लाइफ एनिमेस फमेमेसनमा हेर्नका लागि - पालना दृश्य
by Dima6अगस्ट 2020 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड जीविकोमा एनिमेसनको लागि शीर्ष १० स्लाइस लाइफ एनिमेसनमा हेर्न
"फनिमेसन वेबसाइट" बाट लिइएको (२०२० प्रतिलिपि अधिकार)
"जीवनको स्लाइस" एनिमेस मुख्य रूपमा कथा र परिस्थितिहरूको रूपमा परिभाषित हुन्छन् जुन उनीहरूको प्रारम्भिक उपस्थितिमा सामान्य छैन तर वास्तविक जीवनमा दमदार हुन्छ। यसको मतलब के हो भनेर बुझ्न केही मानिसहरूलाई समस्या छ र हामी वास्तवमै व्याख्या प्रदान गर्न सक्दैनौं किन कि तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ।
जे होस्, हामी जाँदै गइरहेका छौं (हाम्रो विचारमा) "जीवनको स्लाइस" शैलीबाट शीर्ष १० एनिमहरू जुन फनिमेसनमा स्ट्रिममा उपलब्ध छन्। फेरि यो केवल हाम्रो राय हो र अधिक केहि छैन, यदि तपाइँ यसलाई पढ्न रमाईलो लाग्नुहुन्छ भने, कृपया यसलाई मनपराउनुहोस् वा साझा गर्नुहोस्। हामीले यस सूची श्रृ in्खलामा समावेश गरेका छौं जुन डबका साथै सबबेडहरू पनि छन्।
१०.- फ्रेग (उप)
छवि "D-Frag" [ब्रेनको आधार] बाट लिइएको
जीवनको एनिमेसको यस शीर्ष स्लाइसमा १० नम्बरमा लात हान्ने D-Frag हो। म यहाँ तपाईको साथ इमानदार हुन जाँदैछु, डी-फ्रेग मेरो लागि होइन, मैले यो के हेर्दै थिएँ के हुँदै थियो मैले बुझ्न सकेन र कथाले मलाई कुनै अर्थ नै दिएन। तर मैले सिकेको कुराबाट यो काजमा केन्जी हो जसलाई कुनै कारणले "उनी अपराधी हुन्" भन्ने लाग्छ जबसम्म उनी र उनीहरुको गिरोहले केटीहरूको समूह भेट्दैनन् जुन उनी भन्दा बढी "अपमानजनक" हुन्छन्। उहाँ हुनुहुन्छ, र मैले उद्धृत गरे "शंघाई उनीहरूको क्लबमा सामेल हुन, त्यस दिनदेखि उसको दैनिक जीवनमा के हुन्छ?"। यो वास्तवमै केहि विशेष थिएन र त्यसैले यो सूचीको तल छ। यो हेर्नको लागि र colorful्गीन र रमाईलो छ तर चरित्र विकासको अर्थमा केही छैन, पात्रहरू बीचको सम्बन्ध वा समग्र राम्रो र आकर्षक कथा, अन्त पनि राम्रा खराब पनि हो। म केवल एक पटक जान्छु यदि तपाईं साच्चै विचलित हुनुहुन्छ, जस्तो कि म दुर्भाग्यवस थिए।
Game। गेमरहरू (डब)
"गेमर" [पाइन जाम] बाट लिइएको छवि
हाम्रो जीवनको एनीम सूचीको शीर्ष स्लाइसमा number नम्बरमा गेमरहरू छन्, मैले गेमरहरूलाई पहिलो बोरि and र क्रिन्ज रहेको पाएँ तर एकपटक म यसमा सामेल भएँ, कहानी निकै हास्यास्पद र सम्बन्धित छ। कथाले केइता अमानोलाई पछ्यायो जो भिडियो खेलहरूमा व्याकुल छ, मानिसहरूमा खेलको कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन्छ। यद्यपि यो सबै परिवर्तन हुन्छ जब ऊ क्यारेन टेन्डुमा दौडन्छ जो भिडियो खेलहरू पनि मनपर्दछ। उनी अमनोलाई स्कूल गेम क्लबमा सामेल हुन आमन्त्रित गर्छिन् (जुन म विश्वास गर्छु)। उसले केहि नयाँ साथीहरूलाई भेट्छ र केहि सम्बन्धहरू यसको नतिजाको रूपमा नक्कली छन्। कथा एक प्रकारको जटिल हो र यो धेरै यादगार थिएन। हो, यो मैले पहिले देखेको एनिमेजहरू मध्ये एक हो तर यो मेरो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। तपाईं यसलाई एक जानु दिनुहोस् यदि तपाईं Kawaii प्रकार एनिमे को त्यस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ किनभने कि प्रकार को प्रकार यो गेमरहरूमा प्रचुर छ।
Con. सुविधा स्टोर प्रेमी (डब)
"सुविधा स्टोर प्रेमी" बाट लिइएको
जीवन anime सूची को शीर्ष शीर्ष टुक्रा को लागी number नम्बर मा आउँदै छ सुविधाजनक स्टोर प्रेमी, जो मलाई मुट्ठी समय यो देख्न शुरू गरेको धेरै बोरिंग रूपमा मारा। मैले भन्नु पर्छ कि यसले तपाईंलाई प्रवेश गर्न धेरै समय लिनेछ, त्यसैले यो सूचीको शीर्षमा छ। सबै प्रकारको पात्रहरू र सोहि आवाज उस्तै कहानी सुस्त र असंगत छन् र यो मेरो लागि कुनै खास कुरा थिएन। एक पटक तपाईं यसमा प्रवेश गर्नुभयो भने पनि कथा प्रगति हुन्छ। यो लगभग high उच्च माध्यमिक केटाहरू छन् जो सुविधा स्टोरमा पर्खिरहेका छन् उनीहरूले केटीहरूलाई भेट्छन जुन उनीहरूको बर्षमा पनि छन् र उनीहरू यसरी भेट्छन्। शृ of्खलाको क्रममा साथीहरू भेटिन्छन् र एक अर्कालाई चिन्न सक्छन्, दुबै यौन र मैत्री प्रकारको सम्बन्ध बनाउँदछन्। यो सुरुमा बोरि of्गको प्रकार हो तर एक पटक तपाईले भित्र पस्नुभयो भने यो राम्रो हुन सक्छ।
Hen. हेनसुकी (के तपाईं एक प्यारी (डब) भएसम्म तपाईं विकृत रूपमा प्रेममा पर्न तयार हुनुहुन्छ?
"HenSuku बाट लिइएको [औपचारिक रूपमा: के तपाईं एक प्यारी भन्दा लामो समयसम्म एक विकृत तारीख गर्न तैयार हुनुहुन्छ?]"
Life नम्बरमा जीवन शीर्ष एनिमेसको शीर्ष स्लाइसको लागि हामीसँग हेनसुकी छ। मलाई थाहा छ कि तपाईं मध्ये कोहीले हेनसुकीलाई रोमान्स वा हरेम एनिमेजको रूपमा लिनुहुन्छ तर म असहमत हुनेछु। वास्तविक रोमान्सको बाटोमा धेरै छैन यदि तपाईं मलाई यस श्रृंखलामा सोध्नुहुन्छ यद्यपि हरेम प्रकारका दृश्यहरू छन् र त्यसैले यो हाम्रो Harem anime सूचीमा पनि हुनेछ। जे भए पनि हेनसुकी केकेई वा केके नामको केटाको बारेमा हो किनकि यो भनिन्छ कि एक दिन उसले आफ्नो केटीमा केही केटीहरूलाई अण्डरवियर फेला पार्छ प्रेम पत्रको साथ। चिट्ठीले भनेको छैन कि यो कसले लेखेका थिए र पूरै श्रृंखला मूलतः केकी भनेको "अण्डर्रेला" (अंडरवियर आफ्नो लकरमा राख्ने केटी) हो भनेर पत्ता लगाउन कोशिस गर्दैछ। त्यहाँ धेरै संदिग्ध व्यक्तिहरू छन् जसलाई सबैको अजीब फिटिकहरू छन् जस्तै केटाहरू शरीरको गन्धको लागि प्रेम, कुखुराहरूसँग पागल हो वा केकेईलाई आफ्नो दासको रूपमा रुचि राख्ने कुकुरहरू हुन्। होईन, अन्तले मलाई गार्डबाट समात्यो र मैले यो आउँदै गरेको देखिन। म यो जान्छु किनकि यो एकदम हास्यास्पद थियो र त्यहाँ हरेम र प्रशंसक सेवा कार्यको एक धेरै छ।
Ben. बेन-टू (डब)
"बेन-टू" बाट लिइएको
जीवन anime सूची को शीर्ष शीर्ष टुक्रा मा संख्या6को लागी लात लात बेन-गर्न छ। बेन-टूको कथा एकदम चाखलाग्दो र मौलिक हो र यो यही हो जुन मलाई पहिलो स्थानमा हेर्न बाध्य तुल्यायो। बेन-टू एउटा सानो सुपरमार्केट स्टोरको बारे हो जुन केहि अवसरहरूमा बेन्टोलाई आधा मूल्यमा बिक्रीमा राख्छ। जो कोहीले पनि यो मूल्यको लागि यसलाई प्राप्त गर्न चाहान्छ यसको प्राप्त गर्न एक अर्कासँग लडाई गर्नुपर्दछ। हाम्रो मुख्य चरित्र, यो कठिन तरिकाबाट सिक्छ जब उसले यो फाइटमा संलग्न हुनको लागि जानको लागि प्रयास गर्दछ जब त्यसले उत्पादनको लागि पछि जान्छ। यो कथानक यो छ कि यदि तपाइँ त्यो आधा मूल्यको मासु उठाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाइँ जो कोहीले पछाडि पछाडि दाँज्नलाई तयार हुनुपर्दछ। यो बुझ्नको लागि एक धेरै साधारण कथा छ र म यो किन मान्छेले हेर्न सक्दछु। जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ त्यहाँ केवल एक एपिसोड १२ एपिसोडको साथ छ, जबकि त्यहाँ अतिरिक्त हुन सक्छ।
Hy. Hyouka (डब)
"Hyouka" बाट लिइएको
नम्बर number मा लाइफ एनिमेसको शीर्ष स्लाइसको सूचीको लागि ह्युउका हो, जुन किमी नि टोडोकसँग प्रस्तुत गरिएको तरिकामा टोनसँग मिल्दोजुल्दो छ र यसले मलाई सुरुदेखि नै आकर्षित गर्यो। यो एक स्कूल क्लबको बारे हो जुन "क्लासिक साहित्य क्लब" भनिन्छ। पूरै श्रृंखला मूलत: क्लब सदस्यहरू "रहस्य" सुल्झाउने र सानो अभियानमा जाँदैछन्। मुख्य चरित्र धेरै बुद्धिमान छ तर यो यस बारे मा केहि गर्न अनिच्छुक छ। यद्यपि उनका सहपाठी, इरु चितान्डाले उनलाई उनीहरूसँग जाने र उनीहरूले आउने हरेक रहस्यको समाधान गर्न मनाउन सबै भन्दा राम्रो गर्छन्। चारको समूह सामान्यतया सानो रहस्यहरू सुल्झाउने र मानिसहरूलाई मद्दत गर्ने वरिपरि जान्छ, उनीहरूले उनीहरूको क्लबहरूको सिर्जनाको कारण पनि पत्ता लगाउँदछन्। यो एनिमेसको मीठो प्रकारको छ र यसमा २२ एपिसोडहरू छन्। यो म एक होईन जुन म भारी थिए तर यो पक्षमा हेर्दा राम्रो लाग्थ्यो।
D. डम्बलहरू तपाईले उठाउनु भएको वजन कति छ? (डब)
"तपाईंले लिफ्ट गर्ने डम्बेलहरू कत्तिको भारी छन्?" बाट लिइएको हो।
नम्बर For को लागि जीवनको एनिमेसको यस शीर्ष स्लाइसमा तपाईले उठाउने डम्बेलहरू कति भारी हुन्छन्? मैले यो anime हेर्न रमाईलो मजा पाए र कहानी पनि पछ्याउन गाह्रो छैन। कथा १4बर्षकी हिबिकी साकुरा पछ्याउँछिन् जसले छुट्टिमा बढी वजन पाएको देखेर नयाँ स्थानीय जिममा भर्ना हुन चाहे जुन भर्खरै देखा पर्‍यो। जे होस्, जब उनी भित्र छिर्छिन् उनले पाए कि त्यहाँ आधा नग्न शरीर निर्माणकर्ताहरू काम गरिरहेका छन्। यद्यपि यो उनको रुचि अनुसारको छैन, उनको साथीले उसलाई मनाए पछि उनी स्वीकार्छिन् र उनी पनि आफ्नो व्यक्तिगत प्रशिक्षकलाई आकर्षक लाग्छिन्। बाँकी कथा प्रशिक्षकलाई समूहलाई सिकाईएको छ कि कसरी निश्चित कसरतहरू गर्ने र कसरी यी कसरतहरू प्रभावकारी छन्। यो वर्णनको बोर्या sound्ग लाग्दछ तर इमान्दारीपूर्वक मैले यो कथा रमाईलो र रमाईलो पनि पाएँ, अर्नल्ड श्वार्जेनेगरलाई पनि। एक संक्षिप्त उपस्थिति बनाउँछ। म निश्चित रूपमा यसलाई जान दिन्छु र यदि तपाईंसँग पहिले नै तपाईं पढ्न सक्नुहुन्छ भने सीजन २ को सम्बन्धमा लेख।
The. अभिजात वर्गको कक्षा (डब)
"एलिटको कक्षा कोठा" बाट लिइएको
लाइफ एनिमेस्ट सूचीको शीर्ष स्लाइसको लागि तेस्रो स्थानमा आउँदै गरेको इलिटको कक्षा कोठा हो जुन मैले यस बर्षमा हेरेको अधिक यादगार श्रृंखला हो, र म वास्तवमै कसैलाई पनि सिफारिस गर्दछु। कथाले तपाईंलाई सुख्खा बनायो र मलाई अधिकतर क्यारेक्टरहरू मनपर्दैन, यद्यपि यो हेर्दा म मेरो सीटमा किनारमा थिएँ। कथा जापानको एउटा स्कूलको हो जुन विद्यार्थीलाई टेस्ट गर्न र तालिम दिनको लागि राज्य निकायले ठूलो रकम खर्च गरेको हो ताकि उनीहरूले समाजको सर्वश्रेष्ठ प्रभावकारी र उत्पादक सदस्यहरू उत्पादन गर्न सक्दछन् वा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, जापान सम्भ्रान्त। तिनीहरू different विभिन्न वर्ग A, B, C र D मा विभाजित हुन्छन् (D सब भन्दा कम हो)। प्रत्येक वर्गले एक अंकको रूपमा पोइन्स प्राप्त गर्दछन् तिनीहरूको कक्षाको रूपमा तिनीहरूको स्थिति सुधार गर्न। यदि वर्ग पर्याप्त पोइन्टमा पुग्छ भने तिनीहरू अगाडि क्लास ओभरटेक हुनेछन् र तिनीहरू वर्ग बन्नेछन्। साथै, पोइन्ट्स विद्यार्थीहरूको इच्छा केहि पनी प्रयोग गर्न सकिन्छ। मुख्य चरित्र एक सामाजिकियोपाथ पनि हो, जो केवल शीर्षमा चढाई र सबैको प्रयोग गर्नमा रुचि राख्छ। यदि तपाईंले पहिल्यै हेरिसक्नुभयो भने हामी तपाईंलाई हाम्रो ब्लग पढ्न सिफारिस गर्दछौं अभिजात वर्गको कक्षा र एक सीजन २ को लागि सम्भाव्यता।
२. कागुया साम (प्रेम युद्ध हो) (उप)
"कागुया साम (प्रेम युद्ध हो)" बाट लिइएको हो
नम्बर २ मा जीवनको एनीम सूचीको शीर्ष १० टुक्रामा हामीसँग कुगुया समा छ! वा प्रेम युद्ध हो यदि तपाईं चाहानुहुन्छ। तपाईं यस सूचीमा यो देखेर चकित हुन सक्नुहुन्छ किनकि तपाईंलाई लाग्छ कि कागुया सामारा रोमान्स हुनेछ, तर मलाई मात्र सुन्नुहोस्। कागुया समासँग बुश कार्यको वरिपरि पिटाई धेरै नै छ र त्यो शृंखलाको मूल आधार हो। कथा २ उच्च माध्यमिक विद्यार्थीहरू, कागुया शिनोमिया र मियुकी शिरोगानेको बारेमा हुन् जो दुबै एक अर्कालाई प्रेम गर्दछन्। जे होस्, तिनीहरू यसलाई एक अर्कामा स्वीकार गर्न चाहँदैनन् र ती दुवैले पनि एक अर्कामा आफ्नो प्रेम स्वीकार गर्न तयार छैनन्। दुबैलाई थाहा छ कि अर्को उनीहरूसँग प्रेममा छ र श्रृंखलाले चाल र चालहरूमा केन्द्रित छ जुन दुबै प्रयास गर्न को लागी प्रयोग गर्न को लागी र अर्को एक उनीहरुलाई स्वीकार गर्न को लागी।
यो यस्तो छ कि तिनीहरू एक हुन सक्छन् जसलाई पहिले सोधिन्छ। यो एक राम्रो मूर्ख र अवास्तविक (अझै अझै प्रशंसनीय) कहानी छ जुन अन्य पात्रहरूमा पनि केन्द्रित छ। लव इज वारका धेरै उप-उप कथाहरू पनि छन् जुन साना कथाहरूमा विभाजित हुन्छन् जुन यसलाई लाइफ शैलीको स्लाइस जस्तो बनाउँदछ। योसँग यसको अभिव्यक्तिको अपलिफ्टिंग प्रकार छ र यो रमाईलो रमाइलो र हेर्नको लागि मनोरञ्जनात्मक छ। योसँग हाल दुई सत्रहरू छन् र ती दुबै फनिमेशनमा छन्।
1. Kono Oto Tomare! (जीवनको ध्वनि) (डब)
"Kono Oto Tomare बाट लिइएको! (जीवनको आवाज) "
अन्तमा जीवनको एनीम सूचीको शीर्ष स्लाइसको लागि पहिलो नम्बरमा हामीसँग कोनो ओटो टोमरे छ! वा जीवन को ध्वनी यदि तपाईं चाहानुहुन्छ। मँ भन्छु कि, मेरो राय मा, Kono Oto Tomare! त्यहाँ स्लाइस अफ लाइफ एनिम विधाको सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व हो र यदि तपाईं लाइफ एनिमेसको स्लाइसमा हुनुहुन्छ र कोनो ओटो तोमरलाई जानुहुन्न भने, म गम्भीरताका साथ सिफारिस गर्दछु।
जे भए पनि कोनो Oto Tomare मेरो राय मा एक राम्रो राम्रो र सीधा अगाडि कहानी छ। यो टोकिजे हाईस्कूलको कोटो क्लबको कथा हो जुन कुराटा (क्लबका अध्यक्ष) सम्म सदस्यको अभावका कारण अगाडि बढिरहेको छ, कुडो भन्ने कुरा देखेर छक्क परेको छ, एक बालक जसले सबैलाई समस्यामा परेका छनौट गर्ने निर्णय गरिरहेका छन क्लब क्लबमा होजुकी पनि सामेल छ, जो कुडो र कुराता दुबै भन्दा उच्च स्तरमा पेशेवर कोटो खेलाडी हुन्। यद्यपि उनी उनीहरूलाई नागरिकमा लैजाने वाचा गर्दछन्। बाँकी कथा क्लबले क्लबका अन्य नागरिकहरूको लागि क्वालिफाइ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ क्लबको अन्य सदस्यहरूको साथमा सामेल हुने। त्यहाँ केहि अरु सब पात्रहरू सामेल छन् जुन हामीसँग सामेल छ तर हामीसँग अब उनीहरूसँग उल्लेख गर्ने समय छैन।
मलाई लाग्छ Kono Oto Tomare शानदार ढ the्गले स्लाइस अफ लाइफ शैलीलाई समग्रमा कैद गर्दछ र यो एक स्टेपल हो जुन प्रत्येक श्रृंखलामा त्यो शैलीमा मिल्छ। यदि तपाईंले Kono Oto Tomare हेर्नु भएको छैन भने हामी तपाईंलाई वास्तवमै सुझाव दिन्छौं कि तपाईं यो गर्नुहुन्छ। र अर्को तर्फ, यदि तपाईंसँग पहिले नै छ भने, हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईं लेखमा हाम्रो लेख पढ्न एक मौसम3को लागि सम्भावित।
हाम्रो ब्लग बढ्दै छ र हरेक दिन हामी नयाँ दर्शकहरू र अनुयायीहरू पाउँदैछौं। हामी तपाईंलाई हाम्रा अन्य ब्लगहरू पढ्न आग्रह गर्दछौं। यदि तपाईंलाई यो शीर्ष १० मनपर्‍यो भने, तपाईं यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ रोमान्स एनिमेमा शीर्ष हामीले छनौट गरेका छौं, हामी आशा गर्दछौं तपाईले रमाईलो गर्नुभयो र हामी इमान्दारीसाथ तपाईलाई सबैको शुभकामना दिन्छौं
तपाईं तल यस्तै लेखहरू पढ्न सक्नुहुन्छ।
टैग: एनिमे animesimartokonoototoamre animetowatch एनिमेटोवाचमा फ्युनिमेशन funimationgoodanime हास्यनीम हास्यनिमेटोवाचोनफनिमेसन sliceofLiveanime sliceofLiveanimetowatch sliceofLiveanimetowatchonfunimation फ्युनिमेशनमा शीर्ष १० एनिमेटवाच top10sliceofLiveanime
अघिल्लो प्रविष्टि शीर्ष Ro रोमान्स एनिमे
अर्को प्रविष्टि केइजो वर्थ हेर्दै छ?